နျူကလီးယား စမ်းသပ်မှုများ မြောက်ကိုရီးယား ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းကြောင့် တောင်ကိုရီးယား စီးပ?? - Yangon Media Group
နျူကလီးယား စမ်းသပ်မှုများ မြောက်ကိုရီးယား ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းကြောင့် တောင်ကိုရီးယား စီးပ??
ဆိုးလ်၊ ဧပြီ ၂၁
နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုများရပ်ဆိုင်းရန် မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရက ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ပထဝီနိုင်ငံရေးအန္တရာယ်များ လျော့ကျသွားကာ စီးပွားရေးအလားအလာ ပိုကောင်းလာဖွယ်ရှိသည်ဟု ဈေးကွက်သုတေသီများက ဧပြီ ၂၁ရက် တွင် ပြောသည်။ နျူကလီးယားနှင့် ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုများကို ရပ်ဆိုင်းကာ နျူက လီးယားစမ်းသပ်ကွင်းကိုလည်း ဖျက်သိမ်းမည်ဟု မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရက ကြေညာသည်။ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနှင့် မြောက်ကိုရီးယား-အမေရိကန်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီ ထိုသို့ ကြေ ညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါကြေညာချက်ကြောင့် ကျွန်းဆွယ်တွင် တင်းမာမှုများ လျော့ကျသွားမည်ဟု တောင်ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်များက မျှော်လင့် နေကြသည်။ ယခင်ကဆိုလျှင် အခြေအနေများ တင်းမာနေသော ကြောင့် တောင်ကိုရီးယားစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများသည် ဖြစ်သင့် သည်ထက် ပိုမိုလျော့နည်းခဲ့ရသည်။ ”နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းမယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယား ကတိပေးလိုက်တာဟာ တောင်ကိုရီးယားစီးပွားရေးအပေါ် အပြုသ သောဆောင်တဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ စစ်ရေးတင်းမာမှု လျော့ကျလာတာနဲ့အမျှ နိုင်ငံအရေးနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေ လည်း ပိုမိုတည်ငြိမ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု Yonsei တက္ကသိုလ်မှ ဘောဂဗေဒပါမေက္ခ Kim Jung-Sik ကသုံးသပ်သည်။
ဈေးကွက်သုတေသနအဖွဲ့ Moody’s Investors service ကလည်း နိုဝင်ဘာတွင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို AA2 ဟူ၍ စံချိန်တင် အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် မြောက်ကိုရီးယား အရေး ပိုမိုတင်းမာလာပါက စီးပွားရေးထိခိုက်မည်ဟုလည်း သတိ ပေးခဲ့သည်။ ယခုတောင်ကိုရီးယားအရေး မြင်သာကောင်းမွန်လာ ပြီဖြစ်ရာ အဆိုပါအညွှန်းကိန်းသည် ဆက်လက်မြင့် တက်လာဖွယ်ရှိ နေသည်။
ယာဆူကူနီ စစ်သင်္ချိုင်းသို့ ပူဇော်ပစ္စည်းများ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် အာဘေး ပေးပို့
နျူကလီးယား သဘောတူညီချက်မှ အမေရိကန် နုတ်ထွက်ပါက တုံ့ပြန်မည်ဟု အီရန်ကြုံးဝါး
မြန်မာပဲကို အိန္ဒိယက မဝယ်ရန် ရာခိုင်နှုန်းများနေသဖြင့် တရုတ်အကြိုက် ပဲများစိုက်ကာ ဈေးကွက်သ
၂ဝ၁၈ ၏ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး အနုပညာရှင် မင်းသားကြီး ဂျော့ခ်ျကလူနီ